Taariikh Nololeedkii Fiidal Kastaro | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wargeyska Xaqiiqa Times Taariikh Nololeedkii Fiidal Kastaro
Taariikh Nololeedkii Fiidal Kastaro
1926 ayuu dhashay , wuxuuna ka dhashay qoys taajir ah, wuxuuna ku soo bar baaray nolol raaxo leh, hasayeeshee aad ayuu uga soo horjeestey noloshaas waayo wuxuu arkay dhibaatada haysata malaayin reer kuubo ah, Kastaro, waxaa uu qaatay shuuciyadda oo uu u arkay in ay caddaalad iyo sinnaan u keeni karto fuqarada reer Kuubba.
Fidal kastaro, waxaa uu asaasay jabhad ladagaalanta nadaamkii hanti goosadka ahaa eedalka kuubba ka jirey 1950. muddo ayuu dagaalamayey , mar ayaa dala soo xiray isaga iyo walaalki ka yaraa Rauuf, hasayeeshee muddo kadib waa lasii daayey halgankii ayuu isaguna halkii ka sii wadey. 1959kii ayuu ku guuleystey in uu xukunkii kala wareego Madaxweynihii xilligaas Kuubba hoggaaminayey ee raacsanaa mareykanka.
Mareykanka ayaa dagaal aan kala go’ lahayn ku qaaday si ay u ridaan Kastaro, isku day afganbi oo badan ayuu ka badbaadey,waxaana ug weynaa dagaalkii ku can baxay gacanka Khanaasiirta (Doofaarada) oo ahaa dagaal mareykanku ku weerareen Kuubba oo lagu soo abaabuley reer kuubba ku nool mareykanka. Waa lagu jabiyey mareykanka dagaalkaasi, waxaana ciidamada kastaro ku soo qabqabteen maxaabiis kun kor u dhaafayaa.
Markaasi kadibna waxaa dhacday in Gantaalada xanbaarsan Nukleerka ee ruushka in lagu rakibay Kuubba arrintaasi oo khalkhal gelisey mareykanka hasayeeshee markii danbe mareykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in aan kuubba mar danbe mareykanku soo soo weerarin , Ruushkuna in uu gantaalda ka qaado kuubba.
Arrintaasi ayaa Kuubba ka dhigtay mid aamina hasayeeshee aan xiriir lalahayn Mareykan
Markii uu burburay dalkii midowga Soviyeetiga 1991 dii ayaa la filayey in uu saameyn doono burburkaasi Kuubba hasayeeshee wey ka badbaaddey Kuubba, oo waxaa Kuubba noqotay dalka kaliya ee shhciga ah ee ka Jira Galbeedka koofurta Amerika.
Kastaro, Kumannaan ciidana ayuu u diray dalalka Angola iyo Itoobiya si ay u caawiyaan talisyadii shuuciga ee dalalkaasi ka jirey 1977 ilaa siddetameeyadii.
waxaa uu ahaa Kastaro nin hoggaamiye ah oo waqti dheer dalkiisa iyo dadkiisaba u soo shaqeeyey aadna ay u jecelyihiin, wuxuuna gaarsiiyey kuubba hor umar weyn xagga caafimaadka iyo aqoontaba. Waxaa mareykanku kuubba saaray cunaqabateyn dhaqaale muddo 50 sano ah ilaa haddana wey saran tahay.
Previous articleFedel Castro oo geeriyooday iyo taariikh nolaleedkiisa
Next articleDoorashada Aqalka Hoose ee Jowhar oo maanta ka adag maalmihii hore